LCD, LED ဆိုတာ (သို့) Mobile Phone Display Technologies တွေ အကြောင်းတစေ့တစောင်း — Anycall Mobile
By RKhar Min Thant July 28, 20203Mins Read
အခုလို တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ဆန်းပြားသစ်လွင်တဲ့ နည်းပညာတွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကြုံတွေ့လာခဲ့ရပါတယ်။။ ဒီထဲကမှ ကျွန်တော်တို့တွေ သေချာသတိမပြုမိပဲ တိုးတက်လာနေတဲ့ နည်းပညာတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Display Technology အကြောင်းပါ။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်က SmartPhones တွေနဲ့အနေနီးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာ Mobile Phones တွေရဲ့ Display Technologies တွေအကြောင်းကို ဗဟုသုတရဖြစ်ဖွယ် ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
Mobile Phones Display Technology လို့ပြောရင် ကျွန်တော်ပြေးမြင်မိတဲ့အရာနှစ်ခုရှိပါတယ်။ တကယ်တမ်း အခုရှိနေတဲ့ technologies တွေကို ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း အဲ့နည်းပညာနှစ်ခုက မူလဇစ်မြစ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ LCD နဲ့ LED ပါ။ Mobile Phones တွေမတော်တဆမှန်ကွဲသွားလို့ လဲမယ်ဆိုရင် သူများတွေဖုန်းက သုံးလေးသောင်းလောက်ပဲကျပြီး ကိုယ့်ဖုန်းကျမှဘာလို့ ခုနှစ်သောင်းတစ်သိန်းကျော်ကျနေရလဲ ဆိုတဲ့ သင်တို့အသိချင်ဆုံးမေးခွန်းအတွက်အဖြေကို ဒီပို့စ်မှာရှာတွေ့သွားမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ဒီ စာအရှည်ကြီးရေးခဲ့ရတာကို ပီတိဖြစ်ပြီး ကျေနပ်ဂုဏ်ယူမိနေမှာပါ။
Differences between LCD vs OLED
LCD ဆိုတာဘာလဲ ?
LCD ဆိုတာ Liquid Crystal Display ရဲ့အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး အခုလိုမျိုး Display တွေ အဆင့်မြင့်မလာခင် အချိန်ကာလတစ်ခုကတည်းကရှိနေတဲ့ ဘိုးအေနည်းပညာကြီးပေါ့… သူဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ ဆိုတာကတော့ လိုအပ်မယ်မထင်လို့ အသေးစိတ်ရှင်းမပြတော့ပါဘူး။ အရေးပါတဲ့အချက်လေးတွေကိုပဲ ထုတ်နုတ်တင်ပြသွားပါမယ်။ LCD ရဲ့ အဓိကအသက်ဟာ Backlight ပါပဲ။ Backlight သာမရှိဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ LCD သုံးထားတဲ့ ဖုန်း Devices တွေမှာ ဘာကိုမှမြင်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်အနေနဲ့ သုံးသပ်ရရင် အဲ့ဒီ Backlight ဟာ သူ့ရဲ့အားသာချက်ဖြစ်သလို အားနည်းချက်တစ်ခုလို့ဆိုရင်လဲမမှားပါဘူး။
Backlight ပါတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အားသာချက်က Maximum Brightness အရမ်းများပါတယ်။ Maximum Brightness များတော့ နေရောင်(Sunlight)အောက်မှာလည်း ဖုန်း Screen ကိုအလွယ်တကူမြင်နိုင်ပါတယ်… LED တွေစပေါ်လာတုန်းကဆိုရင် ဒီပြဿနာကအတော်ဆိုးရွားခဲ့ပါတယ်…(ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ LED တွေရဲ့ Maximum Brightness ဟာအလွန်နည်းပါတယ်။ နေရောင်အောက် အပြင်ဘက်မှာဆိုရင် ဘာမှကိုမမြင်ရတဲ့အထိပါပဲ။) ဒါပေမယ့်လည်း အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ LED ဖုန်းတွေမှာလည်း Maximum Brightness 600 nits အထက်ကို ထုတ်လွှတ်ပေးလာနိုင်တာကိုတွေ့လာရပါပြီ။
အဲ့ဒါက LCD အတွက် အားသာချက်ဖြစ်သလို အားနည်းချက်လည်းဖြစ်နေပါတယ်။ Maximum Brightness များနေတဲ့အတွက် ညဘက်အခန်းကိုမီးပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကို ကောင်းကောင်းမြင်ရနိုင်ပါတယ်။ ရိုးရိုးလေးပါပဲ သင့်က Brightness ကိုဘယ်လောက်ပဲ အနည်းဆုံးချထားပါစေ။ Display ကြီးက လင်းထင်းနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ LED တွေက ပိုသာသွားမယ်လို့ အခုပဲ သင့်တွေးလိုက်တဲ့အတွေးက 100% မှန်ပါတယ်။
ကဲ LCD ဆီကိုပဲဆက်ပြီးသွားလိုက်ရအောင်… ကျွန်တော်တို့ အနက်ရောင်တစ်မျိုးပဲပါတဲ့ ပုံတစ်ပုံကို LCD Display မှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ အနက်ရောင်ကလင်းနေတာကိုတွေ့ရပြီး တကယ့်အနက်ရောင်ကို တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ LCD မှာ Backlight ရှိကြောင်းသက်သေပါ။ အပြင်မှာလဲ အနက်ရောင် စာရွက်တစ်ရွက်ကို နောက်ကမီးနဲ့ထိုးပြီးကြည့်လိုက်ပါ။ LCD မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့ဖုန်းဟာ LCD လား LED လားသိချင်ရင် အဲ့လိုမျိုး အနက်ရောင်တွေပဲပါတဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ပြီး စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။
LCD ရဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေ
LCD ဆိုတိုင်းလဲ မကောင်းဘူးလို့ပြောလို့မရပါဘူး။ စျေးသက်သာတာ၊ ပြုပြင်စရိတ်ပေါ့လျော့တာ ၊ Color Accuracy ကောင်းမွန်တာ(ကာလာတွေက အပြင်ကအတိုင်းအနီးစပ်ဆုံးတူညီတာ)၊ Maximum Brightness ရနိုင်တာ(နေရောင်အောက်မှာလည်း ဖုန်းကိုပုံမှန်အတိုင်းမြင်လို့ရနေတာ) စတဲ့သူ့ရဲ့အားသာချက်တွေကြောင့် သူဟာလုံး၀ပျောက်ကွယ်မသွားနိုင်သေးတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် အခုလက်ရှိ Upper Mid-Range နဲ့တချို့ Flagship ဖုန်းတွေမှာတောင် LCD ကိုသုံးနေဆဲပါပဲ။
LCD Display ရဲ့ အားနည်းချက်တွေက Backlight အမြဲတမ်းဖွင့်နေရတာဖြစ်လို့ Power Consumption များတာ၊ True Black မရနိုင်တာ၊ ညဘက်အမှောင်ဆုံးအနေအထားမှာ Minimum Brightness မရနိုင်တာ စတာတွေက သူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
LED ဆိုတာဘာလဲ ?
LED ရဲ့အရှည်ကောက်ဟာ Light Emitting Diode ပါ။ LCD နဲ့မတူတဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ သူ့မှာ ကိုယ်ပိုင်အလင်းလွှတ်နိုင်တဲ့ diodes လေးတွေပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် diodes တွေက လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာဖွင့်ပြီး မလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ ပိတ်ထားနိုင်လို့ True Black Color ရတဲ့အပြင် အခုလက်ရှိခေတ်စားနေတဲ့ Ambient Display(Always on Display) feature ကို ကောင်းမွန်စွာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါက LCD မှာမရနိုင်တဲ့ နည်းပညာပါ။ အကယ်၍ LCD မှာသာ Ambient Display လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အချိန်တိုင်း Screen က Activated ဖြစ်နေမှာမို့လို့ Battery Consumption က လုံး၀များမှာပါပဲ။ ဒီလို Diode တစ်ခုချင်းစီက ကိုယ်ပိုင်အလင်းထုတ်လွှတ်နိုင်မှုရှိတာကြောင့်လည်း LCD တွေထက် LED တွေကပိုမိုပြီးစျေးများရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
LED ရဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေ ?
သူရဲ့ Diodes တွေကကိုယ်ပိုင်အလင်းထုတ်လွှတ်နိုင်တာမို့လို့ မလိုတဲ့အချိန်မှာလဲပြန်ပြီးပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ပဲ Power Consumption ကနည်းပါတယ်။ နောက်ပြီး သူ့ရဲ့ Color စိုတဲ့ကိစ္စက အားသာချက်လို့ပြောလို့ရသလို အားနည်းချက်လို့လဲပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Color စိုတာကိုကြိုက်တဲ့သူရှိသလို မကြိုက်တဲ့သူလဲရှိလို့ပါပဲ။ LED ရဲ့ Color Accuracy က LCD လောက်မမှန်ပါဘူး။ မမှန်ပါဘူးလို့ ဆိုတဲ့နေရာမှာ အပြင်က Natural Color နဲ့မတူပဲပိုစိုတာ(Over-Saturated ဖြစ်တာ)ကို ဆိုလိုပါတယ်။ နောက်ပြီး သူ့မှာ Ambient Display(Always on display) ကိုအသုံးပြုနိုင်တာ စတာတွေကသူ့ရဲ့အားသာချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ပုံမှန်အားဖြင့် မမြင်နိုင်တဲ့ LED ရဲ့အားသာချက်တွေကို ရှာကြံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သူက LCD ထက် အပုံကြီးပါးလွှာပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပါးလွှာတာကြောင့် ဖုန်းမှာ တခြားပစ္စည်းတွေထည့်ဖို့နေရာလည်း ပိုဆံ့သွားနို်ငတာပေါ့။.
LED ဖြစ်တယ်ဆိုတိုင်းလည်း ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး။ Color တွေက Oversaturated ဖြစ်နေတာ၊ စျေးကြီးတာ ပြုပြင်စရိတ်များပြားတာ စတဲ့အချက်တွေကြောင့် LED ကိုမကြိုက်ကြတဲ့သူတွေလဲရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကြားနေကျစကားလိုပေါ့။ လက်ချောင်းငါးချောင်းတောင် အတိုအရှည်မတူကြသေးတာပဲ။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အကြိုက်ချင်းဘယ်တူပါ့မလဲပေါ့လေ…
ကဲ ဒီလိုဆိုရင် LCD, LED ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတဲ့ အဖြေတွေအပြင် သူတို့ရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေ ကိုပါသိသွားကြပြီလို့ထင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ဖုန်းဟာ LCD လား ? LED လား ? ဆိုတာကို စမ်းသပ်ကြည့်ကြည့်ကြပါ။ မတော်တဆကွဲတာက LCD ဆိုရင် သိပ်ပြီးကိစ္စမရှိပေမယ့်၊ LED ဆိုရင် ပိုပြီး အကုန်အကျများနိုင်တာမို့လို့ မကွဲမရှရလေအောင် သေသေချာချာလေး ဂရုစိုက်ပြီးအသုံးပြုသင့်ပါတယ်နော်
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရမယ်ဆိုရင် အခုအချိန်မှာ TFT-LCD, IPS-LCD တွေ၊ OLED, AMOLED, Super AMOLED တွေဘာတွေဆိုပြီး နာမည်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေကြပေမယ့် တကယ့်မူရင်းဇာစ်မြစ်ကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ LCD နဲ့ LED ဆိုပြီးနှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ သေချာယှဉ်ကြည့်ရင် LED ကသိသိသာသာပိုပြီး ကောင်းမွန်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း အကြိုက်မတူတဲ့သူတွေကလည်းရှိနေဦးမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း LCD တွေဟာလဲ အခုထိပျောက်ကွယ်မသွားနိုင်သေးတာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် တစ်ရက်ထက် တစ်ရက်ပိုပိုပြီး တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ LCD, LED တွေထက်ပိုပြီး သာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ Display Technology တွေထပ်ပြီးပေါ်လာဦးမလား ?
LCD တွေက တနေ့မှာ ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မလား ? ဆိုတာကတော့
ဆက်လက်ပြီး စောင့်ကြည့်ရဦးမယ့် အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောရင်း …
Author RKhar Min Thant